Wasaarada Caafimaadka Puntland oo goob Caafimaad u dhistay barakacayaasha Garoowe (Sawiro) – Radio Daljir
Wasaarada Caafimaadka Puntland oo goob Caafimaad u dhistay barakacayaasha Garoowe (Sawiro)
Maajo 8, 2013 12:13 g 0
Garoowe, 08 May 2013 Wasaaradda Caafimaadka ee Puntland iyo Haya?dda IOM ayaa waxay si wada jir ah xariga uga jareen xarun caafimaad oo daryeel caafimaad siin doonta qaybo ka mid ah barakacayaasha ku dhaqan magaalada Garoowe.
Masuuliyiin ka socota wasaarada Caafimaadka Puntland ha?ada caafimaadka aduunka ee WHO,IOM iyo hawlwadeenada caafimaadka Gobolka Nugaal ayaa ka soo qaybgalay furitaanka xaruntantaan cusub. oo ku taal xerada barakacayaasha ee Jowle.
Goobtaan caafimaad ee maanta la furay ayaa waxaa ay fursad u tahay dadka ku dhaqan Kaamka barakacayaasha ee Jawle kaas oo si wayn uga fog Isbitaalka Guud ee magaalada Garoowe iyo goobaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay.
Dadka barakacayaasha ah ayaa waxaa ay xiliyada qaar la kulmaan arimo caafimaad daro taas oo ay sabab u tahay inaysan helin biyo nadiif ah iyo saxa xumo ka dhalata goobaha ay daganyihiin waxaana inta badan daddal dheeri ah lagu bixiyaa sidii loo dabooli lahaa inay hellaan adeegyo caafimaad iyo sidii ay u heli lahaayeen Biyo nadiif ah.
Wasaarada caafimaadka Puntland oo kaashanaysa ha?adaha ka shaqeeya arimaha caafimaadka ayaa mudooyinkii danbe waxaa ay wadey daddaalo ay adeegyo kala duwan ku gaarsiineyso dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalooyinka Puntland.
Caawa iyo Daljir, May 7,2013, Xaliimo Sacidyo Cabdilaahi Cai, (Daljir Garoowe)